Sierra Leone sy Guinée : ‘Mitarika ho Amin’ny Fahamarinana’—Dan. 12:3. (Fizarana 1) | Diary 2014
Tonga teto Freetown i Charles Fitzpatrick sy George Richardson ary Hubert Gresham, tamin’ny Jona 1947. Mbola maro koa ny misionera tonga tatỳ aoriana.
Hitan’ireo misionera hoe nazoto nitory ireo rahalahy, saingy tsy tena nahay nampianatra. (Mat. 28:20) Natorony azy ireo àry aloha ny fomba fanaovana fiverenana mitsidika sy fitarihana fampianarana Baiboly. Natorony azy ireo koa ny tari-dalana farany momba ny fivoriana sy ny fandaminana ny asa. Nisy fivoriana ho an’ny besinimaro nalamina tao amin’ny Wilberforce Memorial Hall. Faly be ireo misionera fa olona 450 no tonga. Nasiana Andron’ny Gazety koa isan-kerinandro. Tena nandrisika ny fiangonana ilay fampiofanana, ary anisan’ny nahatonga ny fitomboana tatỳ aoriana.
Tsy mora tamin’ireo misionera anefa ny nizatra ny toetany. Izao no tatitry ny sampana tamin’ny 1948: “Manahirana be ny toetrandro any Sierra Leone. Maharitra enim-bolana ny fahavaratra. Mivatravatra be ny orana ary ela be vao mijanona. Indraindray aza maharitra tapa-bolana tsy an-kiato. Mahamay be koa ny andro amin’ny main-tany, ary mila tsy ho zaka ny hamandoana.” Ireo Eoropeanina nitsidika an’i Sierra Leone fahiny aza niantso azy io hoe toeram-pilevenan’ny fotsy hoditra. Manjaka ny tazomoka, ny tazo vony, ary ny aretina hafa fahita any amin’ny tany mafana. Narary tsirairay ireo misionera ary nody tsikelikely.
Nalahelo ireo rahalahy nefa tsy nilavo lefona. Lasa 73 ny tampon’isan’ny mpitory tamin’ny 1952, raha 38 izany tamin’ny 1947. Lasa nisy fiangonana tao Waterloo, tsy lavitra an’i Freetown, noho ny asa mafy nataon’ny mpisava lalana. Lasa nisy antokona mpianatra Baiboly tao Kissy sy Wellington, izay samy tsy lavitra an’i Freetown. Toa efa vonona hampandroso ny asa ireo rahalahy. Nila tosika kely fotsiny izy ireo.
Tonga teo amin’ny seranan-tsambon’i Freetown ny lehilahy amerikanina iray mahiahia, tamin’ny Novambra 1952. I Milton Henschel, avy tany amin’ny foibe, izy io. Vao 30 taona mahery izy tamin’izany, ary nandeha an-tongotra namakivaky an’ilay tanàna be olona. Hoy izy: “Gaga aho nahita tanàna iray nandroso be, izay mbola nadio lavitra noho ny ankamaroan’ny tanàna mandroso hafa. ... Nahita lalana nisy rarivato aho, fivarotana be olona, fiara vaovao, ary olona maro nifamoivoy.”
Nandeha an-tongotra nankany amin’ny tranon’ny misionera ny Rahalahy Henschel. Tsy lavitra an’ilay Hazo Kapoaka fanta-daza izy io. Nolazainy tamin’ireo rahalahy tafavory tao fa hahazo fanampiana misimisy kokoa i Sierra Leone. Olona 253 no nivory tao amin’ny Wilberforce Memorial Hall ny alahady nanaraka an’io, ka nandre an’ireto fampandrenesana nataon’ny Rahalahy Henschel ireto: Manomboka izao i Sierra Leone dia hanana biraon’ny sampana, mpiandraikitra ny faritra, ary fivoriambe manokana sy fivoriamben’ny faritra. Hasiana fiangonana koa ao Kissy ary hitarina any amin’ny faritra hafa ny asa fitoriana. Faly erỳ ny mpanatrika nandre izany.
Hoy ny Rahalahy Henschel: “Niteny foana ry zareo hoe kusheh, izay midika hoe ‘tsara izany!’ Faly be ry zareo. Niaraka maromaro izy ireo rehefa nivoaka an’ilay trano, tamin’iny alina iny ... ary nisy nihirahira.”
Voatendry hiandraikitra an’ilay biraon’ny sampana vaovao i William Nushy, misionera vao tonga. Mpivarotra karatra sy kodiakely tany amin’ny trano filokana eran’i Etazonia no asan’i William taloha. Nialany io asa io rehefa lasa Kristianina izy. Nifikitra tamin’ny toro lalan’ny Baiboly izy, ary izany no nahatonga ny mpitory teto Sierra Leone ho tia sy hanaja azy.
Sierra Leone sy Guinée (1945-1990): ‘Mitarika ho Amin’ny Fahamarinana’—Dan. 12:3. (Fizarana 1)